China Graphite Rod & Carbon Rod ifektri kanye nabaphakeli | Hexi
Izinduku ze-graphite ezikhiqizwa yi-Hexi Carbon Company zine-conductivity enhle kagesi, i-conductivity eshisayo, i-lubricity nokuqina kwamakhemikhali. Izinduku ze-graphite kulula ukuzicubungula futhi zishibhile, futhi zingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene: imishini, insimbi, imboni yamakhemikhali, ukusakaza, ama-alloys angenazinsimbi, izitsha zobumba, ama-semiconductors, imithi, ukuvikelwa kwemvelo njalonjalo. Izinduku eziningi ze-graphite ezikhiqizwe yinkampani yethu zisetshenziswa ngamakhasimende wezinto zokushisa kagesi ezithandweni zokushisa okuphezulu. Ukumelana nokushisa okuphezulu, izinga lokushisa eliphakeme kakhulu lokusebenza lingafinyelela ku-3000 ℃, ukumelana nokushisa okuhle kakhulu nokubamba okubandayo, i-coefficient encane yokunweba okushisayo, i-coefficient enkulu yokushisa yokushisa ne-resistivity (8-13) × 10-6 Ω m.
Izinduku ze-graphite esizikhiqizayo zinezici ezilandelayo:
1. Ukumelana nokushisa okuphezulu: iphuzu lokuncibilika 3850 ℃ 50 ℃
2.I-Thermal shock ukumelana: Inokushisa okuhle kokushisa okushisayo kanye ne-coefficient yokunwetshwa okushisayo okuncane, ngakho-ke inokuzinza okuhle
3. Ukuqhuba kahle kokushisa nokushisa kagesi. Ukuhamba kwayo okushisayo kuphakeme izikhathi eziphindwe kane kunaleyo yensimbi engagqwali, izikhathi eziphakeme ezi-2 kunalezo zensimbi yekhabhoni nezikhathi eziyi-100 eziphakeme kunalezo ezingejwayelekile
4. Lubricity: The lubricity of graphite rod is similar to that of molybdenum disulfide, the coefficient friction is less than 0.1, futhi lubricity yayo kuyehluka ngosayizi isikali. Ukukhula kwesilinganiso, okuncane ukungalingani kokungqubuzana futhi ngcono i-lubricity
5. Ukuzinza kwamakhemikhali: I-graphite inokuqina okuhle kwamakhemikhali ekamelweni lokushisa futhi ayimelani ne-acid, alkali kanye ne-solvents organic
I-hexi carbon inamandla amakhulu okukhiqiza enduku ye-graphite rod / carbon rod. Ngokuya ngezicelo ezahlukahlukene zamakhasimende, sinikeza osayizi abenziwe ngezifiso, abangaveza izinduku ze-graphite | izinduku zekhabhoni ezihlangabezana nezidingo zakho, ngobubanzi obusukela ku-50 mm kuye ku-1200 mm.
Olandelayo: I-Graphite Block ne-Graphite Cube